လူအများ လက်လှမ်းမှီတတ်နိုင်သော နှုန်းထားတစ်ရပ်ဖြင့် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို ကမ်းလှမ်းပေးမည့် အိန္ဒိယပညာရေး | Mizzima Myanmar News and Insight
Shwe Taung Group၊ Shwe Taung H...
မိုဒရစ်နဲ့ နေမာတို့ မပါဝင်တဲ့...
လူအများ လက်လှမ်းမှီတတ်နိုင်သော နှုန်းထားတစ်ရပ်ဖြင့် ကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို ကမ်းလှမ်းပေးမည့် အိန္ဒိယပညာရေး
Sanjay Thapa ကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့က Sape Events & Media Pvt. Ltd တည်ထောင်သူနဲ့ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် မတ်လ ၂၃-၂၄ ရက် ရန်ကုန်မြို့ Summit Parkview Hotel မှာ ကျင်းပသွားမယ့် ၂၀၁၈ အိန္ဒိယပညာရေးပြပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့ မဇျ္စိမမှ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးမျိုးသန့်နဲ့ Sanjay Thapa တို့ ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကျေးဇူးပြု၍ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျားပဲ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မလား?
ကျွန်တော်တို့ကတော့ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပညာရေးပြပွဲတစ်ခု စီစဉ်ကျင်းပပေးရာမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခုလို ပညာရေးပြပွဲတွေ ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ အိန္ဒိယ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ကျောင်းသားတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောင်အာရှက ကျောင်းသားတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ သူတို့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်မှာ ဘယ်လို ကြိုးပမ်းရယူနိုင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ကို ပိုပြီးနားလည်သွားစေအောင် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ဒါဆို ခင်ဗျားက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပညာရေးပြပွဲတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပြုလုပ်တော့မှာပေါ့၊ အဲဒီတော့ ဒီပြပွဲမှာ ခင်ဗျား ဘာတွေ တင်ဆက်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပေးနိုင်မလား?
ကျွန်တော်တို့ဟာ တော်တော်လေးကို အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုတွေ စုပေါင်းရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ အိန္ဒိယအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကျောင်းသားထောင်နဲ့ချီကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုချင်း မတူညီကြသူတွေနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံတို့အကြား အပြန်အလှန် ဆက်ဆံထိတွေ့နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပေးတယ်၊ မတူကွဲပြားမှုအပေါ် သည်းခံနိုင်မှု၊ လက်ခံပေးနိုင်မှုကို သင်ကြားပေးတယ်၊ နောက်ပြီး နီးကပ်မှုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုချင်းကြား ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေကို ကူညီတည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
ဒါကလည်း မြန်မာကျောင်းသားတွေ ဘာကြောင့် အိန္ဒိယကို လာတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ပြောနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့အကြား နယ်နမိတ်ချင်း ရှည်လျားစွာ ထိစပ်နေတယ်၊ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့မှာ အရမ်းကို နီးစပ်မှုရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တူညီမှုတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စနစ်တွေအပြင် နောက်ဆုံး စားသောက်နေထိုင်ပုံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အကြား တူညီတာတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်လေးနီးစပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ လာတဲ့အခါမှာ သူတို့အတွက် ထူးထူးခြားခြား ပြဿနာရယ်လို့ ကြုံရဖို့ မရှိပါဘူး။ အိန္ဒိယကဟာ သူတို့အတွက်ကတော့ အမြဲတမ်းပဲ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီပညာရေးပြပွဲကို မြန်မာကျောင်းသားတွေ ဘာကြောင့် တက်သင့်တာလဲ?
နံပါတ်တစ်အချက်က ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပဲ အိန္ဒိယဟာ လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အိန္ဒိယကို လာတဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေဆီ ကိုယ်တိုင် ဦးတည်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အိန္ဒိယကို ရောက်လာတယ်၊ နောက်ပြီး ပြည်နယ်တစ်ခုကနေ တစ်ခု ကူးသန်းသွားလာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ မတူညီသည့် အလေ့အထတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ မတူညီကြသူတွေ ရှိနေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ အိန္ဒိယမှာ ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပံ့ပေးထားသမျှတိုင်းကို လက်ခံဖို့က လွယ်ကူပါတယ်။ သူတို့ အိန္ဒိယကို လာတဲ့အခါမှာ နံပါတ်တစ်အချက် သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်ကိုယ် သူတို့မိခင်နိုင်ငံကနေ အရမ်းဝေးကွာတဲ့နေရာတစ်ခု ရောက်နေသလိုမျိုး ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နံပါတ်နှစ်အချက် သူတို့ ဒီမှာ အံ့သြတုန်လှုပ်ရနိုင်မယ့် ယဉ်ကျေးမှုမျိုး သိပ်ပြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာက မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ တူတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိနေလို့ပဲ။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဘက်ကို လာမယ်ဆိုရင် အဲဒါကလည်း မြန်မာကျောင်းသားတွေကို အိန္ဒိယကိုလာဖို့ ကူညီပေးသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းဆီမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးစနစ်တွေရှိကြတယ်၊ မြန်မာမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် ပညာရေးစနစ်ရှိတယ်၊ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပေးနိုင်မလား?
ဒါက အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို ခင်ဗျားမေးလိုက်တာပါ။ သေချာတာကတော့ နိုင်ငံတိုင်း၊ အစိုးရတိုင်းက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးစနစ်တွေကို ထူထောင်ထားကြပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးစနစ်တွေ ထူထောင်ခွင့်တွေလည်း ရှိကြတယ်၊ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယမှာလည်း ten plus two plus three (၁၀+၂+၃) ဆိုတဲ့ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကျောင်းပညာဆယ်နှစ် သင်ရတယ်၊အဲဒါပြီးတော့ အဆင့်မြင့်ပညာရေး သင်ယူရတယ်၊ ဒါကတော့ နှစ်နှစ်ကြာတာပေါ့၊ အဲဒီပြီးမှ ကျောင်းသားတွေက တက္ကသိုလ်တွေကို သွားရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် နားလည်ထားသလောက်ကတော့ ဒီမှာ အတန်းပညာ ၁၁ နှစ် သင်ရတယ်၊ အဲဒီ စာသင်နှစ် ၁၁ နှစ်အောင်မှ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ် ထပ်တက်ပြီး လေးနှစ်သင်ကြားကြရတယ်၊ ဒါကြောင့် မေးစရာတစ်ခုရှိလာတာက မြန်မာရဲ့စနစ်က အိန္ဒိယကစနစ်လိုမျိုး မတူဘူးလားဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ပြီးတော့ မြန်မာကျောင်းသားအများစုကလည်း သူတို့အနေနဲ့လည်း အိန္ဒိယကို ပညာသင်ဖို့ သွားလို့မရဘူးလို့ မေးခွန်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာက မြန်မာကျောင်းသားတွေလည်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးသင်ဖို့ အိန္ဒိယကို လာနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အချက်၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတန်းကျောင်းပညာ ၁၁ နှစ် သင်ယူပြီးတာနဲ့ အဲဒီမှာ တက္ကသိုလ်သွားရတော့မယ့် အချိန်၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ပြီးထားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုလိုတာက ခင်ဗျားအနေနဲ့ ပညာရေးကို နှစ်နှစ် ပြီးမြောက်ပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘွဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ စက်မှုပညာ (engineering) အတွက် အိန္ဒိယကို အမြဲ လာရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပညာသင်နှစ် ၁၁ နှစ်ပြီးထားပြီး အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို သုံးနှစ်တန်း ဒီပလိုမာတစ်ခု ရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယကို ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခု ရဖို့အတွက် လာလို့ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီက ပညာရေးစနစ်နဲ့မတူဘူးဆိုပြီး ထင်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် ဘာပြဿနာမှ မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်၊ သေချာတာကတော့ အိန္ဒိယကို ပညာလာသင်နိုင်ဖို့အတွက် အိန္ဒိ ပညာရေးစနစ်က ခင်းပေးထားတဲ့ တံတားတစ်ခု အမြဲရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာက ဆရာကို ဗဟိုပြုတဲ့ ချဉ်းကပ်သင်ကြားမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေရတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ဆီက သင်ကြားပုံအကြောင်း နည်းနည်းလောက် အသေးစိတ်ပြောပြပေးနိုင်မလား?
အိန္ဒိယပညာရေးစနစ်မှာလည်း သေချာပေါက် ရှိနေဆဲပါ၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ နာလန္ဒာ Nalanda ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကိုတော့ သိရမှာဖြစ်တယ်၊ ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ ကပ်လျက်ရှိတဲ့နေရာပါ၊ Nalanda ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဂုရုတစ်ပါးရှိတယ်၊ ဆရာတွေ ကျောင်းသားတွေကလည်း စနစ်မှာ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတယ်၊ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယကတော့ မြန်မာမှာ ယုံကြည်နေတဲ့ ဒီစနစ်အပေါ် အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စနစ်က အမြဲတမ်း မြန်မာနဲ့ နီးစပ်မှုရှိတယ်၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နောက်တစ်ခုက မြန်မာ့ပညာရေးနဲ့ အိန္ဒိယပညာရေး ဘယ်လိုမျိုး နီးစပ်မှုရှိနေလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ခင်ဗျား ကြည့်လိုက်ပါ၊ အဲဒီတက္ကသိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်တမ်းအကြာမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လေ၊ ဟုတ်တယ်မလား?၊
တစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဆိုရင် အိန္ဒိယ ကလ္လကတ္တား တက္ကသိုလ်နဲ့ ဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့သူတွေဆိုရင် ကလ္လကတ္တားတက္ကသိုလ်ကနေ certificate တစ်ခု ရခဲ့ကြဖူးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးစနစ်က ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ စနစ်နဲ့ တော်တော့်ကို တူသလောက်ပါပဲ။
ဒါဆို မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယပညာရေးကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
ခုတစ်ကြိမ်ကတော့ ပြည်ပကို ထွက်ပြီး ပညာသင်ကြားချင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ပြောပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အိန္ဒိယကို ဘာကြောင့် ပညာသွားသင့်ဖို့ ရွေးရလဲ အတွေးဝင်ချင်ဝင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲဒီတော့ နံပါတ်တစ်အချက်က ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုချင်း အရမ်းကို နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အရမ်းကြီးဝေးကွာတဲ့နေရာမှာ ရှိမနေဘူးလေ၊ ကျွန်တော်တို့အကြား နယ်စပ်က တော်တော့်ကို နီးကပ်စွာ ထိစပ်နေပါတယ်။ နံပါတ်နှစ်အချက်၊ အိန္ဒိယဟာ ခင်ဗျားအတွက်တော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကုန်ကျစရိတ်ပိုင်း သက်သာတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သေချာတာတစ်ခုက ကျောင်းသားတွေ အဆင့်မြင့်ပညာရေး သင်ကြားဖို့ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုပြီး တွက်ချက်ရတာက သူတို့အတွက် အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကနေ နောက်ထပ် ထပ်မံသင်ကြားမယ့်ကိစ္စတွေအတွက် ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း ကုန်ကျစရိတ်က အဓိကအချက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် အိန္ဒိယက အရမ်းကို နှုန်းထားသင့်တော်သက်သာတဲ့ ပညာရေးကို ခင်ဗျားကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီမှာ သွားသင်ကြားဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အိန္ဒိယမှာ ကုန်ကျရတာထက် အဆပေါင်း ဆယ်ဆလောက် ပိုများနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြောရရင် အိန္ဒိယက ပေးနေတဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတွေဟာ ကမ္ဘာက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ ဒီဂရီတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တန်းတူ အသိအမှတ်ပြုခံထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်က မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ အိန္ဒိယပညာရေးကို ရွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ခင်ဗျား သိတဲ့အတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်၊ ဒီတော့ အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်တွေဆီ သွားဖို့အတွက် စကောလားရှစ်တွေရော ရှိသလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကောလားရှစ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စကောလားရှစ် နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အိန္ဒိယ အစိုးရက ပေးတဲ့ စကောလားရှစ်ပါ၊ ဒါတို့တော့ ICC scholarship လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစကောလားရှစ်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားအတွက် စာသင်ကြားမှု၊ နေရေးထိုင်ရေး၊ ခရီးသွားလာမှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျား စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိန္ဒိယသံရုံး ဝက်ဆိုဒ်မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ အသေးစိတ်တွေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ငွေကြေးပိုင်း အဆင်မပြေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဒီအိန္ဒိယအစိုးရ ပေးနေတဲ့ အခမဲ့ စကောလားရှစ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ စာမေးပွဲတော့ ဖြေဖို့ လိုပါတယ်၊ ဒီစာမေးပွဲကိုတော့ အိန္ဒိယသံရုံးက စီစဉ်ပေးတာပါ။ ဒီ စကောလားရှစ်အပြင် ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်အများကြီးလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတက္ကသိုလ်တွေကလည်း စကောလားရှစ်တွေ အများကြီး ပေးနေပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ကျောင်းသားတွေအရဲ့ အမှတ်အပေါ် မူတည်ပြီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိန္ဒိယအစိုးရရော၊ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်တွေကနေပါ ပေးနေတဲ့ စကောလားရှစ်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျောင်းသားတွေ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေများလိုအပ်မလဲ?
ဒါကတော့ ခင်ဗျား ဘယ် ဘွဲ့ဒီဂရီအတွက် တက်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပထမနှစ် တက်မယ့် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒီကတက္ကသိုလ်မှာ ပထမနှစ် ပြီးထားပြီးသူတွေဖြစ်ရပါမယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါ၊ သူတို့အနေနဲ့ ပုံမှန် ဘွဲ့သင်တန်းတစ်ခုအတွက် လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ engineering ကို တက်ချင်သူတွေ၊ ဒီမှာ ဒီပလိုမာသုံးနှစ် ပြီးထားပြီးသူတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယမှာ ဘွဲ့သင်တန်းတစ်ခုအတွက် လျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပလိုမာတစ်ခုလိုချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း ဘာပြဿနာမှ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ ပညာသင်နှစ် ၁၁ နှစ်ပြီးတာနဲ့ သူတို့အနေနဲ့ အိန္ဒိယကို လာပြီး ဒီပလိုမာအတန်းတစ်ခု တက်နိုင်ပါတယ်။
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲရော ရှိသေးလား?
အိန္ဒိယမှာတော့၊ ဒါက နောက်ထပ် တစ်ပန်းသာမှုတစ်ခုပါ၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြည်ပမှာ ပညာသွားသင်လိုတဲ့အခါ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ သေချာတာက ခင်ဗျားအနေနဲ့ သြစတြေးလျ၊ ဥရောပတိုင်းပြည်တွေ၊ အမေရိက တို့မှာ သွားသင်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလို ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေ ဖြေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အဲဒီလို စစ်ဆေးမှုတွေ မဖြေစေချင်ပါဘူး။ လိုအပ်တာကတော့ အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာ ဗဟုသုတနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးနိုင်မှု တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အိန္ဒိယကို လာဖို့ ကျောင်းသားတွေဘက်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တက္ကသိုလ်၊ သံရုံးက အရမ်းကို ရိုးရှင်းတဲ့ စစ်ဆေးမှုတစ်ခု လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ် ပညာရေးကို တက်ဖို့ အရည်အချင်း မှီသလား မမှီဘူးသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
အိန္ဒိယ တက္ကသိုလ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပေးနိုင်မလား?
ဒီနေရာမှာ ခင်ဗျား ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ၊ အိန္ဒိယပညာရေးအကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် သေချာတာတစ်ခုကတော့ လူတွေကတော့ ဒီက ဘွဲ့ဒီဂရီတွေက ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ သတ်မှတ်အသိအမှတ်ပြုခံထားရလား၊ နံပါတ်နှစ်၊ အဆင့်မှီလား၊ တက္ကသိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မြင့်ရဲ့လားဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ချင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အိန္ဒိယပညာရေးမှာက သမိုင်းကြောင်းအရှည်ကြီး ရှိတယ်လို့လည်း အကျဉ်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Nalanda တက္ကသိုလ်နဲ့ စခဲ့ကြတယ်၊ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုပေါ့၊ ဒီကနေ့မှာဆိုလည်း အိန္ဒိယမှာ နည်းပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သိပ္ပံ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပါပြီ။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တွေလည်းအများကြီး ရှိနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းမှီ မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကောင်းတစ်ခု ရထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယကို ဘွဲ့ဒီဂရီရချင်လို့ လာချင်သူတိုင်းကို ပြောချင်တာက ဒါဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသိအမှတ်ပြုခံထားရတယ်ဆိုတာပါ။ ဒါက တန်ဖိုးတွေအများကြီး ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် ဖြည့်ပြောချင်တာက ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ထိပ်တန်းစီအီးအိုတွေ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ Google ကို သိကြပါလိမ့်မယ်။ ခုဆိုရင် Google ကို ဦးဆောင်နေတာက အိန္ဒိယက Sundar Pichai ပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ Pepsi ကို သောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ Pepsi ကိုဦးဆောင်နေတာကလည်း အိန္ဒိယရဲ့ Indra Nooyi ပါ။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သံသယဖြစ်စရာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် တောင်အာရှကို သွားတဲ့အခါတိုင်းဒီကိစ္စက လူတွေ သိနေကြတဲ့အချက်ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ အိန္ဒိယဆိုတာက သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ တောင်အာရှတစ်ခုလုံး နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယက ပညာသင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။
အိန္ဒိယမှာ နေထိုင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကရော ဘယ်လိုများရှိမလဲ?
ဒါ အရမ်းကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံခြားထွက်ကြတဲ့အခါ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတွေ အများကြီး ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းလခ၊ ငါ ဘယ်လောက်သွင်းရမလဲ၊ ဒုတိယအချက်က ငါရဲ့ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် ဘယ်လောက် ကုန်မလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ အိန္ဒိယက နေထိုင်ကုန်ကျစရိတ်က မြန်မာမှာ ကုန်ကျတာနဲ့အတူတူလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက် ပေးမယ်ဆိုရင် ဒါက မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အိန္ဒိယမှာ တစ်လနေထိုင်စရိတ်အတွက် လုံလောက်တာထက်တောင် ပိုပါတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျား အနောက်ဘက် အမေရိကန်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပေးနေရတာ အဲဒီတစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ပေးရတာထက် လေးပုံပုံ တစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး နံပါတ်တစ်အချက် ခင်ဗျားအတွက် စားသောက်မှုပိုင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စားနေကျအတိုင်း အစားအစာချင်း တူပါလိမ့်မယ်။ နံပါတ်နှစ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက နေထိုင်ကုန်ကျစရိတ်က ဒီမှာ ကုန်ကျတာနဲ့အတူတူလောက်ပါ၊ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယကို လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် ထူးထူးထွေထွေ စိတ်ညစ်စရာ ရှိမှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက နေထိုင်ကုန်ကျစရိတ်က ဒီမှာ ကုန်ကျတာနဲ့ အတူတူလောက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ပြည်ပကျောင်းသားဦးရေ ဘယ်လောက်လောက် ရှိမလဲ?
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေ အိန္ဒိယဆီ လာတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေ ၆၀,၀၀၀ ကနေ ၈၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ အမေရိကန်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ တရုတ်ကလည်း အိန္ဒိယမှာ ပညာလာသင်ဖို့ လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဆီ တိကျတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကျောင်းသားတွေကို ပို့ပေးနေတဲ့ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံရဲ့ အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းချက်အရ သူတို့ပြောတာတော့ မြန်မာကနေ အိန္ဒိယကိုလာတဲ့ ကျောင်းသား ၅၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ သူတို့ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအရေအတွက်ကတော့ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တက်နေပါတယ်။
ဒီမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဘာသာရပ်တွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ?
နံပါတ်တစ်၊ ကျွန်တော်တို့ အိန္ဒိယပညာရေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါ အိန္ဒိယကို လာခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေအကြောင်း ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့၊ သူမဟာ အိန္ဒိယ ဒေလီတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူမ ဒါကို အပြည့်အဝလုပ်ခဲ့တာပါ၊ အိန္ဒိယကနေ ကျောင်းတက်ခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ဒါက ခင်ဗျားကို ပြောပြတဲ့ ဥပမာတစ်ခုပါ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင် အိန္ဒိယပညာရေးအဆင့်အတန်းက ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို မြန်မာပြည်သူတွေ သဘောပေါက်နားလည်သင့်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာ အိန္ဒိယမှာ ပညာသင်ယူချင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ခင်ဗျားပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်က ဘာများဖြစ်မလဲ?
မြန်မာကျောင်းသားတွေဆီပေးချင်တဲ့ သတင်းစကား ကျွန်တော့်ဆီမှာ သေချာပေါက် ရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အသက်မွေးမှုအလုပ်အကိုင် နဲ့ပတ်သက်လို့ ရွေးချယ်တဲ့အခါ အဲဒီက အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ဘဝကို ရွှေရောင်ဘဝတစ်ခုဆီ ဦးတည်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နံပါတ်တစ်အချက်၊ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အသက်မွေးမှုအတွက် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ခင်ဗျားကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးသင့်ပါတယ်၊ တစ်ခြားသူတွေပြောတာ နားမထောင်ပါနဲ့။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားဘဝမှာ ခင်ဗျားတကယ်တမ်း ဘာဖြစ်ချင်သလဲ၊ ဘာကို စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုတာကို တွေ့အောင် ရှာပါ၊ ခင်ဗျားကို တစ်ခုခုလုပ်စေဖို့ ဘယ်ဟာတွေ နောက်ကနေတွန်းအားပေးနေလဲ၊ အဲဒီလို နဲ့ ခင်ဗျားတကယ့် ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနောက် လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားအကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မယ့် ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အောင်မြင်နေတဲ့ သူအများစုက သူတို့ စိတ်အားထက်သန် ဖြစ်ချင်တာတွေကို လက်တွေ့ အသီးအပွင့်တွေ ခံစားရအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က မြန်မာကျောင်းသားတွေကို ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ၊ ခင်ဗျား ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ။ ဒီလိုသာဆိုရင် ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ အသက်မွေးမှုတစ်ခု ခင်ဗျားဆီမှာ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။